Golf Cruise ho Hawaii Vacation Vacation Ultimate
Golf Cruise ho Hawaii
Manamboara Hawaiian Cruise Cruise; Ity no Fialan-tsasatra Ultimate Golf - avy amin'i Cameron Porter
Azonareo alaina sary an-tsaina ve ny milalao ranomandry eny anelanelan'ireo hazo palmie, miaraka amin'ny fisian'ny ranomasina tsy misy fiafarana avy any an-dranomasina, hazavana mamirapiratra mamiratra sy ny onjam-pahagagana? Hawaii dia manana ny lalao golf tsara indrindra eran-tany ary inona no fomba tsara kokoa hahafinaritra azy ireo avy eo amin'ny haavo haisianina any Hawaii. Afaka mankafy ny sasany amin'ireo lalao golf tsara indrindra eran-tany ianao ary mankafy ny kianja filalaovana Hawaiian.
Ao an-tsambonao dia hiaina sakafo sy divay, fividianana sy fiaraha-mientana ianao ary afaka manararaotra ireo fitsangatsanganana maro sy fitsangatsanganana eny an-dalamby, raha tianao ny hanana fialan-tsasatra amin'ny golf (fa tsy tianao).
Mihamaro ny olom-gidro isan'andro ary malaza eran-tany. Hawaii dia manana ny sasany amin'ireo tarika golf tsara indrindra eran-tany manerana ny nosy 4 ary inona no tsara kokoa ny mankafy azy ireo, dia avy amin'ny sambo iray amin'ny sambo Hawaiiana. Maro amin'ireo fianarana no nahazo mari-pankasitrahana ary nampiasaina ho an'ny hetsika iraisam-pirenena sy PGA.
Ny Hawaiian cruise cruises dia manana tombon-tsoa maro noho ireo toeram-ponenana tany Hawaii. Ao amin'ny Hawaiian cruise dia tsy mila manahy momba ny fanovana hotely, sidina sidina sy famindrana, fiara lozam-pifamoivoizana any amin'ny nosy tsirairay ary ireo zavatra hafa rehetra izay tsy tianao hampanahy azy. Amin'ny fampifangaroana vakansy golf Hawaiiana sy vakansy hawaiianiana, dia hahita fa sarotra kokoa ny vakansy avy amin'ny Hawaiian Golf izay mahazatra noho ny fampihenana ny fitaterana, ny sidina ary ny filaminana hafa momba ny logistika.
Ny hatsaran'ny Hawaiian cruise dia ny mba hahafahanao mankafy ny lalao golf izay fantatrao fa ny sisa amin'ny fianakaviana dia tsara fikarakarana. Maro ireo fitsangatsanganana an-dalamby sy fitrangan-javatra an-tsambo izay azo antoka fa mitazona ny fianakaviana manontolo hizara mandritra ny faharetan'ny Hawaiian cruise cruise.
NCL (Cruise line Norveziana) no mpandraharaha lehibe indrindra any Hawaii ary manolotra andro 7 ho an'ny Hawaiian golf cruises amin'ny sambon'izy ireo ny avonavon'i Amerika sy ny Pride of Aloha.
Ny NCL dia nampiditra sombin-javatra lehibe mba hahatonga ny Hawaiian fitaterana an-dranomasina ho mahafinaritra kokoa. Ny NCL dia hijery ny lafiny rehetra amin'ny alàlan'ny famandrihana teatra, fitaterana, lesona, fitaovana ary fifaninanan-tarika. Ny NCL koa dia manolotra safidy maromaro momba ny fisotroan-dronono mba hahafahanao mampiasa ny karazam-pifaneraserana mitovy amin'ny fotoana haharetan'ny fitsangatsanganana. Ireo vahiny izay mitondra ny kliobany ihany no hiditra ao amin'ny programa Club Valet NCL. Ny serivisy Valet dia ahitana fitehirizana azo antoka ho an'ny kliobana, fanadiovana ny klioban'ny andro, ary ny famindrana isan'andro amin'ny sambokely sy ny fitahirizana isan'andro isan'andro. Ity serivisy ity dia tonga amin'ny $ 40.
Ny fitsangatsanganana an-dàlam-pandrosoana eny an-dalamby ho an'ny Hawaiian golf dia voamarina ho toy ny sasantsasany amin'ireo karazana golf indrindra eran-tany. Ny ankamaroan'izy ireo dia kilasy manerantany ho an'ny fitsangatsanganana ho an'ireo mpilalao golf rehetra amin'ny ambaratonga rehetra. Maro amin'ny Hawaiian golf courses no taranja eo amin'ny Top 100 Courses Golf Digest Afaka Miala.
Ao amin'ny Hawaiian golf cruise ho azonao ny fisafidianana Hawaiian Hawaiian courses dia niely tamin'ireo nosy efatra Hawaii, Kauai, Maui ary Oahu. Ireto ambany ireto dia vitsivitsy amin'ireo fianarana malaza indrindra amin'ny fantsona rano.
Poipu Bay Golf Course, Kauai. Ny Poipu Bay Golf Course dia angamba ny golf golf malaza any Hawaii ary tsy maintsy milalao.
Voasoratra tsara teny amin'ny hantsan'ny Nosy Kauai ilay fianarana. Ny Poipu Bay Golf dia nampiantrano ny hetsika PGS Grand Slam nandritra ny 13 taona niavaka izay nanasongadina ny sasany amin'ireo anarana goavana indrindra handeha amin'ny lalamby. Ny fanamboarana Poipu Bay Golf Course dia manana serivisy tena teknika lehibe toy ny rafitra navigatika amin'ny atin'ny satelita, izay mampiseho ny halaviranao mankany amin'ny lavaka sy ny fametrahana pin.
Hapuna Golf Course, Nosy Big. Ny Princeville ao amin'ny Kianjan'ny Printsy Hanalei dia iray amin'ireo fianarana tsara indrindra any Amerika. Ny fiantsoana ny prince dia nantsoina hoe golf Digest's Golf Digest Golf Number 1 Golf Course ao amin'ny State of Hawaii. Golf Digest koa dia nanome ny laharana faha-5 amin'ireo fampianarana 75 ambony indrindra eran-tany, ary laharana faha-66 amin'ny "America's Best Courses".
Makaha Resort & Golf Club, Oahu. Ny fianarana dia nalaza ho ny laharana golf an'ny Oahu araka ny fanamarihan'ny gazety Honolulu.
Makaha Resort & Golf Club dia tsiambaratelo miafina. Mahafinaritra ny toerana misy azy io, eo anelanelan'ny Tendrombohitra Waianae manodidina ny Oseana Pasifika. Ny toeram-pitsangatsanganana dia manamboatra fialantsasatra miaraka amin'ireo fitaovana toy ny kilasy golf 18-hole golf, pro-shop, dobo filomanosana, efitrano fivorian'ny orinasa, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana ary maro hafa.
Noho izany, maninona no tsy mampifandray ny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny roa tonta ary mandray ny Hawaiian Golf Cruise Today?
Article by Cameron Porter
Toerana Costco any Hawaii
Fampahalalana momba ny kolontsaina Hawaiiana
Mauna Kea Golf Course, Nosy Big, Hawaii
Diakona mankany amin'ny morontsirak'i Kona ao amin'ny Nosy Big Hawaii
Miara-mandeha amin'ny ankizy any Hawaii
Aiza no hijanona ao Hershey, Pennsylvanie
Fitaterana Slum amin'ny toerana tahaka an'i Brezila
Fampiharana ny Medicaid any Florida
Tibets Vegetarian Restaurant
Fety antoandro antoandro
Zava-miafina atao any Toledo, Ohio
Torohevitra momba ny fampisehoana saripika lehibe amin'ny safari Afrikanao
Mitety biby fiompy any Alemaina
WiFi Downtown Pittsburgh - Access Internet malalaka
Top 6 zoro any Norvezy ho an'ny Swimming
Fampisehoana Ekipa Extreme any Amerika Atsimo
Iberia's Madrid-Barcelona Air Shuttle vs AVE Train
France tamin'ny Aprily - Weather, What to Pack, What to See